wararka maanta-arlaadii.net » Ciidamo Cadaan ah oo Weerar Ku Qaaday Fariisin Uu Shabaab Lahaa
Ciidamo Cadaan ah oo Weerar Ku Qaaday Fariisin Uu Shabaab Lahaa
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya deegaanka Baar-sanguuni oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose, ciidamo isugu jiray Somali iyo Ajaanib ayaa saakay waxa ay weerar ka fuliyeen deegaanka Baar-sanguuni oo Saldhig u ah Ururka Al Shabaab iyo amniyaadkooda.
Hawlgalkan, ayaa waxaa iska kaashaday Ciidanka Xoogga Dalka ee qaybtooda 43-aad, Ciidanka Kumaandooska Danab, Ciidanka Daraawiishta Jubbaland iyo ciidan sida la sheegay ka tirsan kuwa Mareykanka, ee Somaliya ku sugan.
Deegaanka Baar-sanguuni ayaa waxaa ka dhacay dagaal socday mudo ka badan Saacad, sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Ciidamada Jubbaland ee ku sugan duleedka Magaalada Kismaayo.
Weerarkan ay qaadeen Ciidamada Huwanta ah ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii ururka Al-shabaab ay shalay weerar deegaanka Buulo Guduud kula eegteen Ciidamo Cadaan iyo Somali isugu jirta.
Lama oga howlgalka ay fuliyeen ciidamada Cadaanka ah iyo kuwa Somalida ah inuu ka dhashay Khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira, balse waxaa la maqlaayay rasaas ka dhaceysa Deegaanka Baar-sanguuni gudihiisa.
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerarka ciidamada Ajaanibta ah iyo kuwa Somalida ah ay ka fuliyeen deegaanka Baar-sanguuni, sida ay baahisay Idaacadda Andalus ee Afka Al-Shabaab ku hadasha.
Ciidamadan ayaa la aaminsan yahay inay howlgalka ka qaadeen Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah Maamulka Jubbaland, halkaasi oo Saldhig ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Somalida ah ee sida gaarka ah u tababaran
Saraakil Uu Imaaraadka Tababaray Oo La sheegay in lagala Baxay Xereda Gen.Gorden
Daawo Musharax Xil.Ibrahim Yarow Oo Ku Baaqay In Gargaar Deg Deg Ah Lala Soo gaaro Dadka Fatahaada Wabiga Shabeele Uu Saameeyay